Cooking Recipe dia tranokalan'ny Blog Actualidad. Natokana ho an'ny tranonkalantsika tontolon'ny gastronomia, ary ao anatin'izany dia manolotra hevitra momba ny lovia tany am-boalohany izahay raha miresaka momba ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fandrahoan-tsakafo sy ny sakafo.
El Ekipa mpanonta ny Resipeo Cookery Izy io dia misy sakafo mahaliana faly faly mizara ny fahaizany sy ny fahaizany aminao. Raha te ho anisan'izany ianao dia aza misalasala manorata anay amin'ny alalan'ity taratasy ity.
Ny fandrahoan-tsakafo dia iray amin'ireo zavatra tiako indrindra hatramin'ny fahazazako ary nanompo toy ny ampondra-dreniko aho. Na dia tsy misy ifandraisany amin'ny asa aman-draharahako ankehitriny aza, dia manolotra fotoana tena tsara ho ahy ny fandrahoana sakafo. Tiako ny mamaky bilaogy fandrahoan-tsakafo nasionaly sy iraisam-pirenena, mitazona ny fanavaozana ny zava-bita farany indrindra ary mizara ny fanandramana mahandro amin'ny fianakaviako ary ankehitriny aminao.
Tiako ny mahandro sakafo, iray amin'ireo fialamboliko io, izany no antony nanombohako ny bilaogiko, Cooking with Montse, izay hizarako fomba fahandro amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fomba mora sy tsotra ary ankafiziko.
Amin'ny maha-tia sakafo matsiro ahy dia manambara aho fa mpahandro mahandro amin'ny ankapobeny. Amin'ny fisafidianana vokatra sy fifangaroan'ny tsiro dia hitako ny fotoana famoronana isan'andro. Eto aho dia mizara ny lovia tiako indrindra sy ny fomba fahandro azy, fifangaroan'ny nahandro nentim-paharazana sy ny sakafo iraisam-pirenena.
Tiako ny mahandro sakafo hatramin'ny fahazazako, manolo-tena amin'ny fanamboarana ny resako manokana aho ary manatsara ny zavatra rehetra nianarako nandritra ny taona maro, manantena aho fa tianao ny resako tahaka ny tiako hizarana azy ireo aminao.
Ny saiko misokatra foana sy ny filoham-piainana hamorona izao dia nitondra ahy tany amin'ny tontolon'ny lakozia. Manantena aho fa tianao ny resipeoko ary ampiharo. Mahafinaritra izy ireo!
Mpiangona ao amin'ny fandrahoan-tsakafo miadana sy labiera Guinness, efa ela aho no nanomana fomba fikolokoloana rantsan-tànana. Fomban-drazana, maoderina, sahy manao zavatra aho! Manandramana sy manandrana tsiro vaovao, manantena aho fa tianao ny resako tahaka ny fanamboarako azy.